काठमाडौं– मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको आधुनिक पशु बधशाला आगामी आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
संघीय कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ३ को कृषि मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मासु व्यवासायीको पहलमा बधशाला पुनः सञ्चालनमा आउने भएको हो ।
बधशालाको शुक्रवार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अवलोकन गरेका थिए ।
शुरूमा बध गरिएको मासु काठमाडौं र हेटौंडामा पठाइने बधशाला साझेदार संस्था बफेलो क्वालिटी फूडका सञ्चालक सैयाद रियाजौद्दिइनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बधशालामा प्रतिघन्टा २० वटा राँगाभैँसी बध गर्न सकिने छ । राँगा, भैंसी, खसीबोका र कुखुरा बध गर्न सकिने भए पनि शुरूमा राँगा भैँसी मात्र बध गरिने छ ।
उपभोक्तालाई स्वास्थकर मासु उपलव्ध गराउने, अव्यवस्थित बध प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने, पारिश्रमिक तिरेर अन्य उपभोक्ताले पनि पशु बध गराउने उद्देश्यले बधशाला सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले ६१ लाख २९ हजार र संस्थाले ७० लाख सहयोगमा बधशाला सञ्चालन हुन लागेको हो ।
डेनिस सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०२७ सालमा निर्माण भएको आधुनिक बधशाला २०३३ सालमा बन्द भएको थियोे । पछि बफेलो फुड्ले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गरेको वधशाला २०७२ को भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राँगा आयात हुन नसक्दा बन्द भएको थियो ।
५४ दशमलव २५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बधशाला सञ्चालन गरेर नमूना काम गर्न लागेको प्रदेश ३ का कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले बताए ।
स्वस्थ मासु खानका लागि हेटौंडाजस्तै अन्तका पनि बन्द रहेका बधशाला पुनः सञ्चालन र नयाँ निर्माणका लागि पहल गर्ने कृषि मन्त्री खनालको भनाई छ ।
यसैबीच बफेलो फूडले २ वटा चिस्यान घर र ४ वटा चिस्यान गाडी किन्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।